အိပ်မက်အိမ်: နိစ္စဒူဝ ဖြေနေရတဲ့မေခွန်းတွေ အကြောင်း
နိစ္စဒူဝ ဖြေနေရတဲ့မေခွန်းတွေ အကြောင်း
ကျွန်တော်ကို မေးလေ့မေးထ ရှိကြပါတယ်။ မင်းဘယ်သူလဲတဲ့ ။မိုးစွေပါလို့အမြဲတမ်း ဖြေကြားခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော်က မိုးစွေလို့ ပဲ ဖြေချင်တာကို . . . အကြောင်းပြချက်ကတော့ခိုင်ခိုင် လုံလုံ ရှိပါရဲ့ ။
စာဖတ်သူတစ်ဦး ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးတစ်ဦးရဲ့လတ်တလော ရေးသားထားမှုကို ဥပမာ ထားပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၊ ၂၅ ရက်နေ့က အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ ရန်ကုန်မြို့သိမ်ကြီးဈေး အနီးမှာ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြခဲ့ သူ ဦးအုန်းသန်း နဲ့ပါတ်သတ်လို့ဒီ စာဖတ်သူ ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရေးသားချက် အချို့ ပါ ။
" တစ်ကိုယ်တော် ကျော်ကြားလိုမှု ၊
နိုင်ငံရေး လှေကြုံစီးမှု ၊
ပြည်ပမှ ချီးမြှောက်မယ့်ဘွဲ့ တံဆိပ် ၊ ဆုလာဘ်
စတာတွေ နဲ့ဆင်ခြင်မှု ကင်းစွာ လုပ်နေလို့ဆိုပဲ။
တော်ပါပေရဲ့ငါ့ ဆရာရေ . . . ။ စာဖတ်သူတာ မဟုတ်ပဲ စာရေးသူတာဆိုရင် ဆရာ့ဂျပိုးနင်းလို့ကျုပ်တို့သေလောက်ရဲ့ ။ ဒါကြောင့် လည်း ပြည်တွင်းက ထောက်ပံ့ဘဏ္ဍာ လောက်လောက်ငှငှ ရနေတယ်ထင်ပါရဲ့ ။ စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ဆရာရေ . . .။ကျုပ်လည်း ဆရာ့ လိုပေါ့ နာမည်က မိုးစွေ ၊ ဆရာလို တော့ပြန်ကြားရေး ဌာနတစ်ခု ရဲ့အယ်ဒီတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာ ၊ ရရစားစား အလုပ်ကြမ်း သမားဗျ။
တစ်ကိုယ်တော် ကျော်ဇောလိုမှု ဆိုတာတွေ ကြောက်လို့မိုးစွေ လို့သုံးတာဗျာ။ နိုင်ငံရေး လှေကြုံစီးမှု . . . သိနေတယ်လေ . . . ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ မ၀င်ဘူး။ ပြည်ပက ဘွဲ့ တံဆိပ် ရလိုမှု . . . ဝေလာဝေးပါ ငါ့ ဆရာရယ် ။ ကျုပ် ဗမာပြည်ပဲ အမြဲနေမှာပါ။ လိုအပ်လွန်း ၊ လိုအပ်လာရင်တောင် ကျွန်တော် မိုးစွေပါလို့အသိပေးပြီး ဆရာ့ အိမ်လာလည်ပါ့ မယ်။ နောက်မှ တွေ့ ကြတာပေါ့။ ဒီနေ့ တော့ဆရာ့ စာတွေဖတ်ပြီး အစာမကြေ ဖြစ်နေလို့လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက် ဦးမယ်ဗျာ. . . ။